Ihu Nsọ nke Jisos: Nkwa 5 nke Nwanyị anyi | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Nwanyị Nwanyị Kachasị Nsọ Dị Nsọ bịakwutere Nwanne nwanyị ahụ wee sị ya:
“Ihe omume a, ma ọ bụ ihe ngbanwe nke dochie anya ya, bụ nkwa nke ịhụnanya na ebere, nke Jizọs chọrọ inye ụwa, n'oge ọ bụla nke mmụọ na ịkpọasị megide Chineke na Nzukọ. ... A na-agbatị netwọ ndị mmụọ na-agbawa okwukwe site n'obi. … Ọ dị mkpa idozi Chukwu. Ngwọta a bụ ihu dị nsọ nke Jizọs. Ndị niile ga-eyi uwe dị ka nke a, ma ọ bụ ihe nkedo yiri nke ahụ, wee nwee ike ileta Sakramentị Nsọ, na mmezi nke oke iwe, ndị natara Mụọ Nsọ nke m. Nwa nwoke Jesus, n'oge oge agụụ ya na onye ọ na-anata kwa ụbọchị na Sacramentia Oriri Nsọ:
1 - A ga-eme ka okwukwe sie ike.
2 - Ha ga-adị njikere ichebe ya.
3 - Ha gha enwe obi uto iji merie ihe isi ike nke ime mmụọ na nke mpụga.
4- a ga enyere ha aka n’ihe egwu nke nkpuru obi na aru.
5 - Ha ga-enwo n’udo udo n’iru Nwa nke Chi m.
Obere akụkọ banyere agba nke ihu nsọ
Ihe ngbanye ugwu nke Mmuo Nsọ nke Jisos, a na-akpokwa '' ihe ngosi nke Jesu 'bu onyinye sitere n'aka Meri nne Chukwu na nne anyi. N'abalị nke May 31, 1938, Ohu nke Chukwu Mama Pierina De Micheli, onye nọn nke ụmụ nwanyị nke Immaculate Conception of Buenos Aires, nọ n'ụlọ ụka nke Institute na Milan site na Elba 18. Mgbe ọ na-emikpu onwe ya na nsọpụrụ miri n'ihu ụlọikwuu ahụ. , Nwanyị nwanyị mara mma pụtara n’elu ya n’ọkụ na-enwu ọkụ: ọ bụ nwanyị kachasị nsọ nwanyị nke nwanyị kachasị nsọ.
O jidere meda n'aka ya dika onyinye nke dikwasiri ihu nke Kraist nwuru anwu n’elu obe, nke edekwasiri ya n’akwukwo Akwukwo nso, “Mee ka oria nke iru gi n’aru anyi, Onye-nwe.” N'akụkụ nke ọzọ, e nwere onye nnabata na-enwu gbaa nke nwere mmachi site na mkpesa "Nọnyere anyị, Onyenwe anyị".
Ntutu ofufe nke S.Volto natara ikike nke ulo uka na 9 nke August 1940 site na ngozi nke Card.Ildefonso Schuster, onye mọnk Benedictine, raara onwe ya nye S.Volto di Gesù, mgbe ahu Archbishop nke Milan. Mgbe o merichara ọtụtụ nsogbu, ihe mkpuchi nke ọla ahụ wee bido njem ya. Nnukwu onye ozi medal nke St Volt nke Jizọs bụ ohu Chineke, Abbot Ildebrando Gregori, onye mọnk Silvestrian Benedictine, kemgbe 1940 nna nke mmụọ nke ohu Chineke nne Pierina De Micheli. O mere ka a mara ihe nrite site n'okwu na n'omume na Italy, America, Asia na Australia. Ọ juputara ebe niile n'ụwa niile na 1968, site na ngọzi nke Nna dị nsọ, Paul VI, ndị na-enyocha mbara ala America debere ya ọnwa.
Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị na ndị Katọlik, ndị Ọtọdọks, ndị Protestant na ndị na-abụghị Ndị Kraịst na-enweta nrịgo gọziri agọzi. Ndị niile nwere amara ịnata ma buru ihe ngosi dị nsọ jiri okwukwe, ndị nọ n'ihe ize ndụ, ndị ọrịa, ndị mkpọrọ, kpagbuo, ndị agha nke mmụọ ọjọọ, mkpụrụ obi mmụọ mmụọ na-emekpa, ndị mmadụ n'otu n'otu na ezinụlọ nke ụdị nsogbu niile, nwerela. n’elu ha otu nchekwa nke Chineke, ha chọtara ịdị-nwayọ, ntụkwasị obi na okwukwe na Onye Mgbapụta. N'iru ihe ubochi nile a na eme kwa ubochi, ayi nuru ezi okwu nke okwu Chineke, ma olu onye dere aburu onye ahu site na mgbe ahuru obi.
“Onyenwe anyị, Gosi anyị ọnọdụ gị ka a zọpụta anyị” (Abụ Ọma nke 79)
Onyinye nke ubochi n’o Nso Nso
Ihu nsọ nke Jesus m dị ụtọ, ndụ ebighi ebi na ngosipụta nke mmụọ na ihe nwụrụ n'ihi mgbapụta nke mmadụ, a na m akpọrọ gị asị, ahụkwara m gị n'anya. Ana m edo gị nsọ taa na oge m niile. Ana m arịọ gị n’ekpere, omume na nhụjuanya nke taa maka aka dị ọcha nke Eze Nwanyị Na - adịghị ọcha, ka kpuchie maka ma mezie mmehie nke ihe ndị e kere eke dara ogbenye. Mee m ezi ozi gị. Ka uto gi di nma n’ebe m no ma jiri ebere n’eme ka ọkụ baa n’ili mgbe onwu m. Ka ọ dịrị.
Ihu dị nsọ nke Jizọs na-ele m anya.